Ngwọta ahụike | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ - Ịhụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Nkwupụta a bụ nkwekọrịta ahụike maka Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ. Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ozi zuru ezu gbasara ọnọdụ ahụike na ọgwụgwọ. Ihe omuma a abughi ndụmọdụ, ma ekwesighi ka emeso ya.
Ịkwụsị akwụkwọ ikike
A na-enye ozi ahụike na weebụsaịtị a "dị ka" n'enweghị ihe nnọchiteanya ma ọ bụ nkwenye, kwupụta ma ọ bụ kọwaa. Ụgwọ Ụgwọ Ụgwọ ahụ enweghị ihe nnọchiteanya ma ọ bụ nkwenye n'ihe gbasara ozi ahụike na saịtị weebụ a.
N'enweghi ajọ mbunobi n'ozuzu nke paragraf ahụ e kwuru n'elu, Ụlọ Ọrụ Ụgwọ Ọrụ ahụ adịghị akwado na:
• ozi ahụike na weebụsaịtị a ga-adị mgbe nile, ma ọ bụ dị na ya; ma ọ bụ
• ozi ahụike na saịtị weebụ a zuru ezu, eziokwu, ziri ezi, na-adị ugbu a, ma ọ bụ ndị na-eduhie eduhie.
Ekwesighi ịdabere na ozi a na weebụsaịtị a ka ozo nye ntule ahuike site n'aka dọkịta gi ma obu onye nkesa onodi ahuike.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ihe ọ bụla gbasara ahụike, ị ga-ahụ dọkịta gị maọbụ onye ọrụ ahụike ọkachamara.
Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ike ịnọ n'ụlọnga ọ bụla, ị kwesịrị ịchọrọ ọgwụ ahụ ozugbo.
Ịkwesịrị igbu oge ịchọ ndụmọdụ ahụike, ịghara ile ndụmọdụ ahụike anya, ma ọ bụ kwụsị ọgwụgwọ maka ozi gbasara ebe nrụọrụ weebụ a.
Enweghị ihe ọ bụla n'ime nkwuputa ahụike a ga-ejedebe nke ọ bụla n'ime ụgwọ anyị anyị n'ụzọ ọ bụla a na-enyeghị ikike n'okpuru iwu dị mkpa, ma ọ bụ wepu ụgwọ ọ bụla nke ụgwọ anyị nke nwere ike ọ gaghị ewepụ n'okpuru iwu metụtara.
Edere akwụkwọ a site na iji ụdị nkwekọrịta Contractology dị na http://www.freenetlaw.com.